Fampiharana sy toetra mampiavaka ny loko manamarika arabe
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-09-27
Ny lokon'ny marika marika fandokoana mafana dia matetika ampiasaina amin'ny làlambe sy ny làlambe ambonin'ilay kilasy 2. Ny hatevin'ny fanaronana an'ity loko ity dia (1.0 ~ 2.5) mm. Ny vakana fitaratra fitaratra dia mifangaro ao anaty loko, ary vakana fitaratra fitaratra kosa hafafy amin'ny tany mandritra ny fananganana marika. Ity marki ...
Fantatrao ve ireo famantarana sy marika ireo?
Mampahatsiahy ny olona ny fomba tokony haleha sy ny tokony harahi-maso ny mpamily sy ny diany rehefa mitondra fiara sy mandeha ianao, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fitazonana ny filaminan'ny fifamoivoizana sy ny fiarovana ny fifamoivoizana. Ireto avy: Ny loko eo afovoan'ny làlambe dia fotsy na mavo, izay zatra ...
Inona avy ireo lalàna mifehy ny fametrahana toerana azo antoka amin'ny fifamoivoizana?
Ny tanjon'ny fametrahana toerana azo antoka amin'ny fifamoivoizana dia ny hiantohana ny fiarovana ny mpamily sy ny mpandeha an-tongotra ary hanome ny anjara toerana feno ny làlambe. Ireto ny lalàna mifehy azy: ny tetezana mihoatra ny ambany dia apetraka amin'ny faritra ampitan'ny mpandeha an-tongotra, bisikileta na fiara hafa ...
Toetra mampiavaka ny vakana fitaratra azo itarafana Ny vakana fitaratra azo taratra dia boribory fitaratra mafy misy savaivo kely. Izy ireo dia vita amin'ny vovoka fitaratra misy silicon, sodium ary calcium ary atsoaka amin'ny hafanana ambony. Noho ny haavo avo ...